यस्तो छ सुनचाँदीको मूल्य अवस्था ? - Everest Dainik - News from Nepal
यस्तो छ सुनचाँदीको मूल्य अवस्था ?
काठमाडौं । आइतबार नेपाली बजारमा सुनचाँदीको मूल्यमा कुनै परिवर्तन आएको छैन ।
साताको अन्तिम दिन शुक्रबार नेपाली बजारमा सुनको मूल्य ५७ हजार ९ सय र चाँदीको ७ सय ४० रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो भने आज आइतबार सुनचाँदीको मूल्य स्थिर अवस्थामै रहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जानकारी दिएको छ ।
याे पनि पढ्नुस खुशीको खबर : बजारमा सुनचाँदीको मूल्य सस्तियो !